Abidjan Blog Camps: Maika ny asa fanoratan-gazety mikatsaka tombontsoam-bahoaka ao Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2019 5:11 GMT
Vao roa volana lasa izay, nosamborina i Théophile Kouamouo avy any Côte d'Ivoire, iray amin'ireo bilaogera Frankôfônina eto Afrika malaza sady mpitarika ny tetikasa Rising Voices nahazo vatsy, Abidjan Blog Camps, nosamborina noho ny fiarovana ny loharanom-baovao tamin'ny tatitra an-gazety mpanao fanadihadiana momba ny olana tombontsoam-bahoaka izy. Navotsotra ihany izy taty aoriana ary nisaotra ny namany bilaogera manerantany noho ny fanohanana azy.
Resaka tombontsoam-bahoaka amin'ny Media. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr PhillipC. CC BY.
Janice Winter ao amin'ny Fandaharana Axess momba ny asa fanoratan-gazety sy ny demokrasia milaza momba ny fandrahonana ny asa fanoratan-gazety tombontsoam-bahoaka sy ny fiarovana loharanom-baovao any Afrika:
Tany Afrika Atsimo aho herinandro vitsy lasa izay nanao fanadihadiana tamin'ireo mpanora-gazety sy tonian-dahatsoratra momba ny tombontsoan'ny fahalalahan'ny mediantsika sy mikasika ny mariky ny lalànam-panjakana mitotongana, toy ny volavolan-dalàna momba ny tolotra haino aman-jerim-panjakana izay – raha lany – dia ho lasa haino aman-jerim-panjakana tompon'andraikitra mivantana manoloana ny minisitry ny fifandraisana.
Tamin'ny lahatsoratra fanadihadiana tao amin'ny bilaoginy manokana. Manoratra ny antony itakiana maika ny asa fanoratan-gazety mikatsaka tombontsoam-bahoaka i Théophile:
Mihevitra ny mpitsikera sasany fa tokony havoaka ho hitan'ny daholobe amin'ny fomba tsy mitanila ny fanaovan-gazety ary mijanona eo. Isan'ireny, ny praiminisitra Frantsay teo aloha, Michel Rocard, izay voatsikera tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny gazety Marianne isa-kerinandro (mpanakiana mafy an'i Nicolas Sarkozy), mba hiasa “tsy toy ny mpitati-baovao vaovao fotsiny ihany, fa ho mpisehatra politika. Matetika atao amin'ny gazety Ivoariana izany tsikera izany.
Inona no atao hoe asa fanoratan-gazety? Angamba vavahady misokatra omena izao tontolo izao matetika mihidy mba hampitomboana ny fahalalan'ny vahoaka momba ny tontolo ankehitriny, araka izay ho izy na tsia. Tanteratsika ve io asa io? Na izany na tsy izany, hita mazava fa, ao amin'ny lanitra antsika, sy amin'ny fampitam-baovao an-tsoratra manokana, dia “mitantara be loatra” karazam-baovao isika. Ny iray mifandraika amin'ny politika, anisan'izany ny habeny sy ny mpanao politika, ny ankamaroan'ny olona sy ny fanatanjahantena, lohahevitra izay manintona mpamaky betsaka ao amin'ny saranga antonony izay afaka manome vola ampy hividianana gazety. Manadino fisehoan-javatra lehibe isika, anisan'izany ny ampamoaka mety hanangana ny mpiara-belona amintsika, ary manosika azy ireo hanao hetsika fanovana ara-tsosialy. Ny tsy fahombiazantsika, fampitam-baovao tsy miankina, dia nohamafisin'ny fisian'ny fampitam-baovaom-panjakana, ao an-tanindrazana, mijanona ho fahefana sy sehatra fialamboly ambany vahohon'ny dokambarotra tanteraka (dikan-teny amin'ny milina)
Théophile manohy hoe [fr]:
Tena ilaina maika ny manentana ny asa fanoratan-gazety mikatsaka ny tombontsoam-bahoaka. Amin'ny toe-javatra iray izay tahaka ny foroporonina fotsiny ny fisaraham-pahefana indraindray, satria mahery ny fisolelahana sy ny firaisana tsikombakomba amin'ny lovan'antoko tokana, ny anjara asantsika, mihoatra noho fizahana izay lesoky ny fiarahamonina, dia ny manavotra ireo olom-pirenena tsy manam-peo iharan'ny tsy rariny ary manadihady an-takonana am-paharetana amin'ireo lohahevitra ilaim-bahoaka. [..]
Misy ve na any an-toeran-kafa ao amin'ny lani-tsika patirao mety afaka mamatsy vola karazana asa fanoratan-gazety izay hanitikitika sy hanova ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny filazana izay maizina ao aminy? (fandikana milina)
Martin Moore ao amin'ny British Journalism Review manazava ny asa fanoratan-gazety mikatsaka ny tombontsoam-bahoaka:
Manana singa roa ny asa fanoratan-gazety mikatsaka ny tombontsoam-bahoaka. Singa voalohany izy toy ny mpiambina, mitazona ny matanjaka hanao tamberin'andraikitra; mampiseho ny fisolokiana, ny fitaka, ny kolikoly, ny tsy fahaiza-mitantana ary tsy fahaiza-manao.
Tsy dia resahana firy ny singa faharoa amin'ny asa fanoratan-gazety, kanefa manan-danja amin'ny lafiny maro, indrindra amin'ny tontolon'ny firongatry ny vaovao. Andraikitra mampahafantatra, manazava sy mamakafaka izany. Mahita, mandevona (mitsakotsako) ary manapongatra sombim-baovao manampy ny vahoaka hanana fomba fijery sy hanapa-kevitra ny asa fanoratan-gazety. Ahoana no ahalalako, ohatra, raha tokony na tsy hanome vaksiny marobe ho an'ny zanako aho? Hatraiza no tokony atahorako ny otrikaretina H5N1 sy ny tokony handraisako fepetra? Tokony hamolavola fitaovam-piadiana nokleary ve i Iran ary raha izany, inona no tokony ataontsika momba izany? Hanome fivontosan'ny atidoha ve ny findaiko? Miha mifandraika sy be pitsony ny tontolontsika ary mila fampahalalam-baovao izay mitady marina ny hanazava fa tsy mampatahotra, mitrandraka na mandrahona.
Martin Moore manontany hoe:
Ka raha manova ny fizotran'ny asa fanoratan-gazety mikatsaka tombontsoan'ny besinimaro ny governemanta, dia sambatra ihany ny orinasa hampiroborobo ny tombotsoa manokana fa tsy ny tombontsoan'ny besinimaro, fa mbola ampoka tanteraka ao anatin'ny tsy fahafantarana ny vahoaka, afaka miaro ny tombontsoam-bahoaka ve ny fampahalalam-baovao?
Profesora Jay Rosen ao amin'ny oniversite New York milaza hoe:
Raha manolo ny besinimaro ho kianja tokana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana ny tsena, ho rendrika avokoa isika rehetra. Tsy maninona izay ataontsika, tsy maninona izay ataon'izy ireo. Ny filaharan'ny TV irery ihany no misy dikany.
Raha tokony harovana ny asa fanoratan-gazety mikatsaka ny tombontsoam-bahoaka, dia tsy maintsy hampiroboroboana sy velomina. Ny fomba iray azo atao dia ny ezaka toy ny ProPublica, orinasa tsy mitady tombombarotra miorina ao New York City, izay nahazo ny loza Pulitzer tamin'ity taona (2010) ity noho ny tatitra nataony momba ny tombotsoan'ny besinimaro. Manantena izahay fa hahita ezaka tahaka izany atsy ho atsy any Afrika satria nilaza i Théophile fa tadiavina maika izany.